Wednesday September 18, 2019 - 21:36:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo caawa fiidkii ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka dhacay wadada Makka Al Mukarrama oo ammaankeeda ay si aad ah u ilaaliyaan ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay mas'uuliyadda qaraxan oo lagu beegsaday gaadiid uu la socday Xildhibaan C/Qaadir Caraboow oo kamid ah xubnaha Baarlamaanka dowladda.
Al Shabaab waxay sheegtay in qaraxu uu haleelay gaari Cabdi bile ah oo ay saarnaayeen ciidamadii ilaalada u ahaa Xildhibaan Caraboow "Mujaahidiinta ayaa caawa qarax ku beegsaday gaari ay la socdeen maleeshiyaad ilaalada u ahaa Xildhibaan katirsan golaha baarlamaanka dawaaqiidda Kooxda Riddada Soomaaliya, qaraxa barakaysan ee mujaahidiintu ka fuliyeen wadada Makka Al Mukarrama waxaa ku dhintay 3 askari oo kamid ahaa ilaalada xildhibaanka badbaaday" ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay Al Shabaab.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xilligii uu qaraxu dhacayay ay wadada marayeen laba gaari oo midna ahaa bullet proof nuuca aysan xabaddu karin iyo gaari Cabdi Bile ah.
Xildhibaan Caraboow ayaa saarnaa gaariga bullet proof-ka ah balse khasaaraha ugu daran wuxuu gaaray ciidamadii ilaalada u ahaa.
badanaa madaxda dowladda DF-ka ayaa isticmaala gaadiid nuuca aysan xabaddu karin ah halka maleeshiyaadka ilaalada u ah ay saaraan gaadiid dusha ka faydan oo unugul qaraxyada waxaana muuqata in mas'uuliyiintu ciidamada ilaalada u ah ay ka dhiganayaan gaashaan ay isaga dhigaan rasaasta iyo firirada qaraxyada.
Qaraxa caawa ka dhacay wadada Makka Al Mukarrama oo halbowle u ah isku socodka gaadiidka ay isticmaalaan madaxda dowladda ayaa banaanka soo dhigaya sida ammaanka Muqdisho uu faraha uga baxan islamarkaana Al Shabaab ay ugu gacan sarreeyaan dagaalka dhanka amniga ah ee caasimadda ka socda.